Haweenka ka shaqeeya Suuqa Eastleigh - BBC Somali
Haweenka ka shaqeeya Suuqa Eastleigh
2 Nofembar 2013
Haweenka Soomaaliyeed ayaa waxaa soo wajaha culeys dhanka dhaqaalaha ah marka ay maareynayaan nolosha caruurtooda iyo mararka qaar nimankooda. Haweenka ay u joogaan caruur yaryar ah ayuu culeysku ku sii badan yahay.
Tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay haweenka bilaabeen inay u istaagaan nolosha qoysaskooda taasoo culeys dhaqaale keentay. Shaqo la'aan sare, qoysaska oo kala tago iyo sababo kale ayaa qasab ka dhigay in haweenka ay u istaagaan nolosha reerahooda.
Cabdifitaax Ibraahim Cagayare, ayaa waxaa uu la kulmay mid ka mid ah hooyooyinka ganacsiga yaryar ku leh Nairobi, sidaasna reerkeeda ku biisho.